Soomaaliya oo laga xusayo Maalinta Nabadda Adduunka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya oo laga xusayo Maalinta Nabadda Adduunka
Soomaaliya oo laga xusayo Maalinta Nabadda Adduunka
Muqdisho(SONNA)—Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta ka hadlay maalinta nabadda adduunka oo maanta oo kale laga xuso caalamka, taasoo ku beegan 21-ka September.
Guddoomiyuhu waxa uu Soomaalida ku booriyay inay nabadda ka shaqeeyaan, si loo gaaro horumarro dhinacyo badan leh, wuxuuna u rajeeyay inay sandkaan kiisa kale ku gaaraan nabad iyo horumar.
Dhinaca kale waxaa isna munaasabaddaasi awgeed ka hadlay Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed, wuxuuna sheegay in maanta oo ku beegan maalinta Nabadda Adduunka ay muhiim tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay u istaagaan xoojinta Nabadda, ayna ka hortagaan cidkasta oo carqaladeyneysa Nabadda Dalka.
Guddoomiyaha oo ka hadlayay munaasabad lagu weyneynayay xuska maalinta Nabadda adduunka 21-ka September oo ku beegan maanta ayaa sheegay in dhallinyarada looga baahanyahay in ay door muuqda ka qaataan Nabadeynta dalka oo ay ka hortagaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay Soomaaliya ka dhigtaan meel gabaad ah.
Guddoomiye Thaabit Cabdi Maxamed ayaa xusay in dhallinyarada ay tahay 75%, isla markaana haddii ay gacmaha is qabsadaan ay ka soo dhallaali karaan doorka uga aadan ka shaqeynta Nabadda dalka, isla markaana maamulka Gobolka uu isna gacan ka geysan doono sidii dhallinyarada loogu abuuri lahaa fursado shaqo.
“Maanta oo ah maalinta Nabadda adduunka, ardaydii ayaa ka qeyb gashay si ay ugu dhiiri geliyaan dadka ka shaqeynaya Nabadda, waxaan mar labaad ku celinayaan in aan u istaago ka shaqeynta Nabad iyo Nolol, Hambalyo Hambalyo” ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho.
Previous articleShirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay Mowqifka Soomaaliya ee Arrimaha Khaliijka, Arrimaha Amniga, Miisaaniyada 2018 iyo arrimo kale
Next articleQaxooti Soomaaliyeed oo lagu xiray Yemen